Dagaalkan oo ahaa mid ay labada dhinac isku adeegsadeen hubka fudud iyo midka culus ayaa wuxuu qarxay kaddib markii xoogag taabacsan Al-shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda ku sugnaayeen oo dhianca garoonka diyaaradaha ka xiga magaalada Baydhabo.
"Waa jirtaa in xoogag Al-shabaab taabacsan ay maanta soo weerareen saldhig ay ciidamada dowladdu ku lahaayeen duleedka Baydhabo, balse ma sheegi karno hadda khasaaraha ka dhashay dagaalka, waayo howgallo ayaa socda," ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidamada dowaldda Soomaaliya ee Baydhabo ku sugan oo saxaafadda la hadlay.
Goobjoogayaal ku sugan halka uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegay inay arkeen maydadka shan ka mid ah dhinacyadii dagaalamay, balse aysan jirin wax khasaare ah oo kasoo gaaray dadka shacabka ah dagaalka.
Isbitaalka Baydhabo ayaa la dhigay dhaawacyo ka mid ah askartii dowladda ee ku dhaawacmay dagaalka, waxaana saldhiggii lagu dagaalamay weli gacanta ku haya ciidamada dowladda Soomaaliya.
Xarakada Al-shabaab ayaa iyadu ka hadlin dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay, iyadoo dagaalkan uu qayb ka noqonayo dagaallo ka dhacayay gudaha iyo daafaha magaalada Baydhabo tan iyo bishii Feberaayo ee sannadkan markaasoo Al-shabaab laga qabsaday degmadaas.
10/23/2012 8:51 AM EST